File .Zip गरेर Virus बाट बचाउनुहोस - Ddus Gajurel Blogs
File .Zip गरेर Virus बाट बचाउनुहोस
on Friday, May 14, 2010 in Win Zip or Win RAR, जानकारी
के तपाइले याद गर्नु भएको छ तँपाइले ब्याकप राखेको कुनै सप्टवेर इस्टल गर्न खोज्यो चने फाइल मिस भयो भन्छ ।
कुनै बेला त आफुसंग नभइ अरूबाट ल्याएको ब्याकप पनि भाइरस छ चनेर एण्टीभाइरस ले अटोमेटीक डिलीट गर्छ । भाइरस ले होस या एण्टीभाइरस ले कुनै बेला पनि तँपाइको ब्याकममा भएका फर्मेटहरू जस्तै .EXE, .Dll, .msi Etc……. जस्ता फर्मेटहरू डिलीट हुन सक्छ । अब सोच्नु होला एण्टीभाइरसले कसरी डिलीट गर्छ ?? तर याद राख्नुस भाइरसको बिभिन्न प्रबारमध्ये अहीले धेरै चलेको New folder.EXE भाइरस हो
। जब कम्पुटरमा यो भाइरस पर्छ तब तपाँइसंग भएको एण्टीभाइरस ले धेरै मात्रामा .EXE फाइलहरू डिलीट गर्न सक्छ ।
यो समस्या बाट बच्न के गर्ने होला ??
Win Zip or Win RAR को प्रयोग ।
याद गर्नुहोस इन्टरनेट बाट कुनै लाइल डाउनलोड गर्दा .Zip वा .RARफर्मेटमा हुन्छ । जुन लाइलहरूलाइ भाएरस या एण्टीभाइरस ले कुनै असर गर्न सक्तैन ।
यो बाट फाइल कम्प्रेस गर्दा दुइ फर्मेटमा कम्प्रेज गर्न सकिन्छ । .Zip र .RAR,
.Zip फाइल खोल्नको लागी यो Win Zip इस्टल नगरी पनि प्रयजसो अपरेटीङ सिस्टममा खुल्छ तर .RAR फाइल को लागी Win Zip or Win RAR प्रोग्राम कम्प्युटरमा लोड गर्नु पर्छ
Win Zip को Free Version डाउनलोड को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस
साथै Win RAR को Free Version डाउनलोड को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस र आफुलाइ चाहेको अपरेटीङ सिस्टमको लागी जुन फर्मेटमा चाहीन्छ त्यहा बाट डाउनलोड गर्नुहोस ।
प्रयोग गर्ने तरीका ।
Win Zip or Win RAR इस्टल गरी सके पछी फोल्डर लाइ जिप गर्न फोल्डर मा राइट क्लिक गर्नुहोस अनी Add to Active.. मा क्लिक गर्नुहोस ।
कुन फर्मेटमा फाइल राख्ने हो टिक लगाउनुहोस अनी OK मा क्लिक गर्नुहोस
Win Zip or Win RAR बाट फाइल कम्प्रश गरे पछी यस प्रकारको फोल्डर आइकन देखीन्छ
Win Zip or Win RAR को प्रयोग बाट भाइरस या एण्टीभाइरस ले कुनैपनि .Zip वा .RAR, फाइल लाइ असर पार्दैन
Labels: Win Zip or Win RAR, जानकारी